Tresaka Archives - Page 2 sur 136 -
Mahagaga sy mahatalanjona mihitsy ity afitsoky ny CENI amin’ny fikirakirana ny voka-pifidianana filoham-pirenena ity. Efa iaraha-mahita izao ireo hosoka sy hala-bato mibaribary eny anivon’ireo distrika maro, ny hamoaka ny vokatra vonjimaika anefa no mahamaika ny …Tohiny
Hifantoka eny amin’ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana ny mason’ny mpanara-baovao manomboka rahampitso. Na dia efa nisy aza mantsy ny fangatahanana tao mba hisian’ny mangarahara sy ny fampitahana ny voka-pifidianana, dia maika sy dodona …Tohiny
Manao ny vahoaka malagasy ho vendrana mihitsy ireto mpanao politika sy manam-pahefana sasany, ao anatin’izao fikirakirana ny voka-pifidianana izao. Izy ireo ihany mantsy no tsy mahita na mody tsy mahita ireo fahotana mahafaty nitranga nandritra …Tohiny
Tsy toa ny isan-taona ny fankalazana ny Noely amin’ity taona 2018 ity fa hafa mihitsy. Tsy azo ihodivirana mantsy ny raharaha mafampana eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao dia ny vao niatrehana ny fifidianana filoham-pirenena. …Tohiny